Mkpa mmanu: Naturalzọ Di Ume Ahụike Na Ezigbo Ahụhụ | Ọkọwa Okwu Ahụike
Mmanụ mmanu: Naturalzọ Dị Mma Maka Ahụike na Beingdị Mma
Mmanụ ndị dị mkpa bụ ihe sitere n'okike nke ahịhịa metabolism. A na-ahụta ha dị ka mmiri mmiri na-alụso ọrịa ọgụ. Mmanụ ndị dị mkpa sitere na mkpịsị ahụ, mkpụrụ, akwụkwọ, ogbugbo, mkpọrọgwụ, rind, ifuru na ifuru ahịhịa.
Mgbe ịzụrụ mmanụ dị mkpa emela iwe iwe maka ọnụahịa ahụ. Nke mbu, ha bara ezigbo uru. Nke abuo, mgbe ejiri ya nke oma o ga-ewe obere obere iji mezuo oru a. 'Ll ga-achọkwa ịzụrụ mmanụ mmanụ dị mkpa. Dịkwuo ọcha mmanụ dị mkpa ka ọ ga-adị. Ihe niile sitere n'okike na kemịkalụ kwesịrị ịbụ naanị ụdị mmanụ dị mkpa ị zụrụ. Mgbanwe ndị ọzọ na nhazi nwere ike ịgbanwe ike na ịdị ọcha nke mmanụ. Mmanụ dị mkpa nke na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwanyị ma ọ bụ ndị oyi na-atụ bụ ihe dị ukwuu iji.
Enwere ike iji mmanụ dị mkpa mee ọtụtụ ebumnuche. Aromatherapy, mmanụ ịsa ahụ, ojiji nke ọgwụ, na ịhịa aka n'ahụ bụ nanị ole na ole n'ime ihe ndị a na-ahụkarị maka mmanụ dị mkpa. Maka ọgwụgwọ anụ ahụ, nke dị irè, n'agbanyeghị ihe ebumnuche gị, enwere ike ị nwere mmanụ dị mkpa iji gboo mkpa gị.
Mgbe ị na-eche maka mmanụ aromatherapy dị mkpa enwere ụdị dịgasị iche iche ebe esi eme nhọrọ gị. The ọcha aromatherapy mkpa mmanụ ka ike ọgwụgwọ ọgwụgwọ utịp. E nwere mmanu ndi aromatherapy di nkpa n’ebe nile ha nwere otutu ogwu di iche.
Nke a bụ ụfọdụ ozi nyere gị aka ikpebi ịzụta mmanụ ọ bụla dị mkpa. Iji bido, mmanu mmanu ndi di nkpa gha gha bu mmanu n’ime mmanu ndi ozo. Mkpọpu mmiri ga-eme ka ihe ahụ na-aga n’ihu ma na-adịgide. Mmanụ mmanụ dị mkpa agaghị ebelata nsonaazụ ya.
Enwere ike iji mmanụ ịhịa aka dị mkpa ịhịa aka dị mma. Ebe ọ bụ na ịsa ahụ dị mma nwere ike ịbụ ụzọ dị mma iji dochie anya ngwụsị nke ụbọchị, olee ụzọ kachasị mma iji zuo ike karịa ịgụnye ngwaahịa ga - enyere aka n'ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ, site na ime ka mmụọ na uche gị dịghachi n'ọnọdụ anụ ahụ. Ọ dị mkpa iburu n’obi na mmanụ ga-eme ka ihu nke ọkpọ ahụ dajụọ nke ukwuu, yabụ kpachara anya mgbe ị na-apụ n’ime tubụ ma jide n’aka na ị ga-asa ahụ nke ọma mgbe ị kwụsịrị iji zere ihe ọghọm n’oge ọzọ ịsa ahụ.
Dịka ọ dị na ngwaahịa ọ bụla, ọ dị mkpa ịlele mgbe niile ihe dị na mmanụ ma zụta ha n'aka ụlọ ọrụ a na-akwanyere ùgwù ebe ị nwere mmesi obi ike nke ihe ndị ọzọ eji. Ọrịa ọgwụgwọ pụrụ iche nwere ike ibute mmeghachi omume ojoo mgbe ị na-eji mmanụ ndị a. Ọ bụrụ na ị nwere ọbara mgbali elu, ịtụrụ ime, waraa, ọnọdụ obi, ọrịa shuga na ịgakwuru onye dibịa tupu i were ya. Cheta, ọ bụ ezigbo iwu isi na mkpịsị aka gị were obere oge were rụọ ọrụ ụlọ gị tupu oge iji jiri ahụ ike gị kwụọ ụgwọ ya.
Aromatherapy - Kachasị Ebe Karịa Naanị Ikuku Akpịrị
Mkpa mmanụ dị mkpa maka acne: Iji Aromatherapy maka anụahụ dị ọcha
Uru dị ịtụnanya nke Mmanụ Melaleuca
Aromatherapy a na-ejikarị eme ihe
Osisi mmanụ dị mkpa - Ihe onyinye dị oke ọnụ